Sɛnea Wobɛko Atia Atipɛnfo Nhyɛso | Mmoa a Wɔde Ma Abusua No
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malagasy Maltese Norwegian Oromo Pangasinan Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
Sɛnea Wobɛko Atia Atipɛnfo Nhyɛso
“Mewɔ mfinimfini sukuu no na mmofra pii mpɛ m’asɛm, na midii ho yaw. Enti bere a mifii ntoaso sukuu ase no, mesesaa me su ne m’ahosiesie—a na ɛnyɛ nea ɛfata. Ná mepɛ sɛ minya nnamfo, enti migyaa me ho mu maa m’atipɛnfo, sɛnea ɛbɛyɛ a me sukuufo bɛpɛ m’asɛm.”—Jennifer, 16. *
Worehyia atipɛnfo nhyɛso? Sɛ saa a, saa asɛm yi bɛboa wo ma woadi so.
Sɛ wugyaa wo ho mu ma atipɛnfo nhyɛso a, wodan bɛyɛ sɛ robɔt a entumi nnwen efisɛ woma afoforo kyerɛ wo nea ɛsɛ sɛ woyɛ. Dɛn nti na ɛsɛ sɛ woma wonya wo so tumi saa?—Romafo 6:16.
Atipɛnfo nhyɛso betumi ama nnipa pa ayɛ nneɛma bɔne.
“Fekubɔne sɛe ɔbra pa.”—1 Korintofo 15:33.
“Ayɛ te sɛ yenim sɛ biribi pɔtee bi nnye, nanso sɛ yehyia saa tebea no a, yɛyɛ nea nkurɔfo ani begye ho mmom!”—Dana.
Nhyɛso no bi betumi afi yɛn ankasa hɔ.
“Bere a mepɛ sɛ meyɛ nea ɛteɛ no, bɔne na ɛwɔ me ho.”—Romafo 7:21.
“Nneɛma a mete nka sɛ ɛhyɛ me so no fi m’ankasa; nokwarem no, ɛyɛ me na mepɛ sɛ meyɛ nneɛma a m’atipɛnfo ka ho asɛm ma ɛyɛ te sɛ nea ɛyɛ anigye no.”—Diana.
Sɛ woamma afoforo anhyɛ wo so a, ebetumi ama w’ani agye.
“Munkura ahonim pa mu.”—1 Petro 3:16.
“Bere bi na ɛyɛ den ma me sɛ megyina atipɛnfo nhyɛso ano, nanso seesei memmɔ hu sɛ mɛkyerɛ m’adwene na makura me gyinaesi mu pintinn. Biribiara nni hɔ a ɛsen sɛ wode ahonim pa bɛkɔ kɛtɛ so.”—Carla.
Sɛ atipɛnfo rehyɛ wo so sɛ yɛ bɔne bi a, sɔ nea edidi so yi hwɛ:
Susuw nea ebetumi afi mu aba no ho. Bisa wo ho sɛ, ‘Sɛ mekɔyɛ nea wose menyɛ no na sɛ wɔkyere me ɛ? Adwene bɛn na m’awofo benya wɔ me ho? Ɛbɛma mabu me ho dɛn?’—Bible nnyinasosɛm: Galatifo 6:7.
“M’awofo bisa me nsɛm bi te sɛ, ‘Sɛ wugyaa wo ho mu ma wɔn a, dɛn na ebetumi ato wo?’ Wɔboa me ma mihu sɛnea atipɛnfo nhyɛso betumi de me asi bɔne kwan so.”—Olivia.
Si w’adwene pi. Bisa wo ho sɛ, ‘Dɛn nti na migye di sɛ meyɛ eyi a, ebetumi apira me anaa afoforo?’—Bible nnyinasosɛm: Hebrifo 5:14.
“Meyɛ abofra no, sɛ obi bisa me asɛm bi a, na mibua sɛ dabi anaa mema mmuae tiawa, nanso seesei mitumi kyerɛkyerɛ nea enti a mɛyɛ biribi anaa merenyɛ no mu yiye. Mema me yiw yɛ yiw, na me dabi nso yɛ dabi. Memma obi nyi nsɛm ano mma me—me ara mibua m’asɛm.”—Anita.
Susuw onipa ko a woyɛ ho. Bisa wo ho sɛ, ‘Onipa bɛn na mepɛ sɛ meyɛ?’ Afei susuw nhyɛso no ho na bisa wo ho sɛ, ‘Dɛn na anka saa onipa no bɛyɛ wɔ tebea yi ho?’—Bible nnyinasosɛm: 2 Korintofo 13:5.
“M’ani gye sɛnea mete no ho, enti memma sɛnea afoforo bu me no nhaw me. Ɛno da nkyɛn a, nnipa pii ani gye sɛnea mete no ho.”—Alicia.
Susuw daakye ho. Sɛ wowɔ sukuu mu seesei a, hu sɛ mfe kakra—anaa asram kakra—akyi no, worenhyia nnipa a worebɔ mmɔden sɛ wobɛsɔ wɔn ani no wɔ baabiara.
“Mehwɛɛ foto bi a me ne me sukuufo twae, na mankae wɔn a na mene wɔn wɔ sukuudan biako mu no binom din mpo. Nanso bere a na me ne wɔn wɔ sukuu mu no, na nea wɔbɛka no ho hia me sen me gyidi a na mekura mu. Nkwaseasɛm ara kwa!”—Dawn, seesei wadi mfe 22.
Siesie wo ho. Bible ka sɛ: ‘Munhu sɛnea ɛsɛ sɛ mubua obiara.’—Kolosefo 4:6.
“M’awofo boa me ne me nuabea ma yesusuw tebea a ebetumi asisi ho, na afei yɛyɛ ho ɔyɛkyerɛ sɛnea ɛbɛyɛ na sɛ yehyia tebea no ankasa a, yebehu nea yɛbɛyɛ.”—Christine. ▪
^ nky. 4 Wɔasesa edin ahorow a ɛwɔ asɛm yi mu no bi.
“Nea onipa gu no, ɛno ara na obetwa.”—Galatifo 6:7.
‘Wɔn a wɔn ho akokwaw no tumi de wɔn adwene a wɔatete no no hu papa ne bɔne mu nsonsonoe.’—Hebrifo 5:14.
“Monkɔ so mpɛɛpɛɛ mo mu nhwɛ.”—2 Korintofo 13:5.
“Sɛ wubetumi agyina atipɛnfo nhyɛso ano a, ɔfã kɛse no ara gyina sɛnea wubu wo ho so. Sɛ wunim nea woreyɛ a, womfa nea afoforo susuw nhaw wo ho—atipɛnfo nhyɛso ho asɛm nhia wo.”
“Sɛ wubu wo ho abomfiaa a, ɛma wobɔ mmɔden sɛ wone afoforo bɛbɔ na woate nka sɛ wo nso woyɛ obi. Nanso sɛ wowɔ ahotoso a, ɛyɛ mmerɛw sɛ wubehu sɛnea atipɛnfo nhyɛso te, na woapo.”
Nni Wo Nnamfo Akyi Nkɔyɛ Bɔne!